Multi Game Card $30 USD ~ ICT.com.mm
HomeMulti Game Card $30 USD
Multi Game Card $30 USD
Multi Game Card isaleading cash-based alternative payment platform for online games, virtual goods and digital content. MGC, abbreviated from Multi Game Card, provides an easy way for users to access... [Learn more]
Brand: MultiFilter by: Gaming Gift Cards, pcmm
MGC, abbreviated from Multi Game Card, provides an easy way for users to access multiple games around the world.
Multi Game Card ( USD $30 တန်) ဖြစ်ပါတယ်။ Multi Game Card ဆိုတာက အင်တာနက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဂိမ်းတွေ၊ ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်တွေအတွက် ငွေပေးချေဖို့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဂိမ်းကတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Multi Game Card ကို လက်ခံတဲ့ ဂိမ်းနဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ Payment အတွက် Multi Game Card ကို ရွေးချယ်ပေးပြီး ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကာ စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဂိမ်းစာရင်းကို https://www.multigamecard.com/site/where-to-use မှာလည်း သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Pick the game you’d like to top-up with the Multi Game Card (MGC).
Navigate to the payment page and choose "Multi Game Card" as your payment option.
To proceed further, just follow the available instructions provided.